Imithambo nemithambo engqinibeni naphambi kwengalo
NguDavid Terfera, uShereen Jegtvig
Imisipha kunye namalungu engqiniba nengalo yangaphambili afuna ukubonelelwa luvo kunye nokuhamba kwegazi. Iimbilini ezinkulu kunye nemithanjeni ziqala entanyeni yakho kwaye ziqhube ubude beengalo zakho, zihlala ezandleni zakho.
Ipilisi ejikelezayo yeorenji 1/2
Amasebe emithambo alandelayo avela kwi-plexus ye-brachial entanyeni kwaye ahambe ngengalo ukubonelela ngengqiniba kunye nengalo yangaphambili. Ezinye zezi mithambo-luvo ziyaqhubeka ngengalo yangaphambili ukubonelela ngesihlahla nasesandleni.
Umtya wemedian: Le nerve iqala kwi-plexus ye-brachial kwaye ibaleke isuka kwi-axilla ezantsi ecaleni komthambo we-brachial. Yehla iye kwi-cubic fossa. Inika amasebe asebenza ngokudibeneyo engqinibeni kwaye aqhubeke ezantsi kwinxalenye engaphambili yengalo nakwisandla ngethumbu le-carpal.
uluhlu lwee-antibiotics ezinamandla
Isibindi se-Ulnar: Le luvo luqala kwi-plexus ye-brachial, idlula ngaphakathi kweengalo ukuya kwi-brachial artery, iqhubeke ngasemva kwi-medic epicondyle ye-humerus, kwaye ingene kwingalo yangaphambili. Ihamba ngecala eliphakathi kwengalo ide ingene kwisandla esihlahleni.
Imithambo-luvo yeradial: Le nerve iqala kwi-plexus ye-brachial kwaye ibaleke ngasemva kumthambo we-brachial kunye nangaphandle kwintloko ende ye-triceps. Ijika ijikeleze i-shaft ye-humerus kwaye iyaqhubeka ukuya kwi-cubic fossa. Ukusuka apho lingena kumasebe anzulu nangaphezulu kwaye liqhubeke lisezantsi kwicala elingaphambili lokungena kwisandla.
Imisipha yemisipha: Le luvo lubaleka ukusuka kwi-plexus ye-brachial kwinxalenye engaphambili yengalo kwaye iye ibe luvo lwangasemva olusikekileyo lwengalo.
Imithambo ibaleka isuka egxalabeni isiya esihlahleni ngamasebe nje ambalwa anikezelwe ecaleni kwengqiniba. Imithambo engaphezulu neyozulu ibuyisela igazi entliziyweni. Ukulandela sisishwankathelo esifutshane:
Umthambo weBrachial: Lo mthambo uvela kwimithambo ye-axillary. Ihamba ecaleni kwengalo engaphandle, ingena kwi-cubic fossa, kwaye yahlulele kwimithambo ye-radial kunye ne-ulnar. Inamasebe alandelayo enza i-arastial anastomoses (imithambo edibeneyo) ebonelela ngengqiniba:
Umthambo onzulu wengalo (profunda brachii artery)
Umthambo ophezulu we-ulnar yesibambiso
ungathatha i-advil kunye ne-dayquil
Umthambo ongaphantsi kwesibambiso se-ulnar
Umthambo we-Ulnar: Le mithambo ibaleka ukusuka kwi-cubital fossa ezantsi kwinqanaba elingaphambili kunye neliphakathi lengalo kude kube kungena esihlahleni.
Umthambo ojikelezayo: Lo mthambo ubaleka kwi-cubital fossa ezantsi kwindawo engaphambili nengasemva yengalo ide ingene esihlahleni.
Imithambo yeCephalic kunye ne-basilic: Le mithambo inikezela ukubuya okungafunekiyo.
thenga iqvar akukho myalelo
Imithambo ye-Brachial, radial, kunye ne-ulnar: Le mithambo inzulu. Bahamba kunye nemithambo yamagama afanayo.
Ungayibetha ngokulula i-olecranon kunye nee-epicondyles. I-olecranon yibhombu enkulu oyivayo (kwaye mhlawumbi uyayibona) ngasemva kwengqiniba. I-epicondyles zezona zibalulekileyo zinamaqhuma emacaleni engqiniba. I-biceps kunye ne-triceps izihlunu ze-brachii zinika indawo eyinyama yengalo ukumila kwayo.
I-cubital fossa luxinzelelo olungunxantathu kwindawo engaphandle yengqiniba. Unqamleze i-pronator teres kunye nezihlunu ze-brachioradialis. I-cubital fossa iqulethe i-radial kunye ne-median nerves, i-biceps brachii tendon, kunye nemithambo enzulu, kwaye yindawo apho amasebe e-brachial artery kwi-ulnar kunye ne-radial artery. Ungayicofa le ndawo ngokucinezela iminwe yakho kulusu ngaphezulu kwecandelo lengqiniba. Kulula ukuyenza xa ingalo ikhululekile kwaye ingqiniba ithe kruthu kancinci. Umthambo wama-cubic medial, indawo eqhelekileyo yokuphindisela, ibaleka ngokungaphezulu kwimithambo ye-brachial kwaye ilele nje phantsi kolusu.
Ungayisebenzisa njani iphepha elipapashiweyo elimhlophe
ukuba isitatimenti ku-r
nini ukuthatha i-lantus
Iwindows imowudi yethebhulethi eshushu
s 90 3 ipilisi eluhlaza
isikwere inani ngokugqwesa